Aakar February 12, 2016
हिजो स्कुल गइएन । स्कुलमा अनुपस्थित हुन्छु भनेर निवेदन पनि लेखिएन । निवेदन लेखिएको भए, साथीले पहिलो घन्टी हाजिर गर्ने सरलाई निवेदन दिन्थ्यो होला। अघिल्लो महिना लक्ष्मणले निवेदन लेखेर पठाएको थियो, उसको बुवाको हस्ताक्षर सहित । तर पनि भोलिपल्ट उसले पहिलो घन्टीमा बाँसका सिर्कनाले कुटाइ खाएको थियो । सर सहित, हामी सबैले, उसको बुवालाई नरेश भनेर चिन्थ्यौँ, तर हस्ताक्षरमा राम नरेश लेखिएको थियो । अरुलाई नक्कली हस्ताक्षर गराएर ल्यायो भनेर, उसले पिटाइ खाएको थियो । भोलिपल्ट लक्ष्मणले आफ्नु बुवालाई स्कुलमा लिएर आयो, मैले हस्ताक्षर गरेर पठाउँदा पनि मेरो छोरालाई कुट्ने भनेर नरेश काकाले सरहरुलाई गाली गरेपछि, सुरेश सरले केही दिनका लागि कसैलाई कुनै कार्वाही गरेनन् । तर दोस्रो, तेस्रो हप्ता देखि नै नभनी बिदा बस्ने, निवेदन नपठाउनेहरु, अनि फर्जी हस्ताक्षर गराउने विद्यार्थीहरुले कुटाइ खान थालेका थिए । आज पालो मेरो थियो, कुटाइ खाने। निर हालेर धोएको सेतो सर्ट, सेतो पाइन्ट अनि कपडाकै सेतो जुत्ता, तेलले चिपिक्क पारेर वाँया फर्काएर कोरिएको-कलप लगाइएको कालो कपाल, सर्टको खल्तीमा रातो र कालो कलम, निधारमा रातो अव
युट्युबको नेपाल संस्करण आजबाट सुरु
Aakar January 12, 2016
युट्युबमा आजबाट नेपालमा ट्रेन्डिङ भइरहेका भिडियोहरु हेर्न सकिने भएकोछ । गुगल'ले नेपाललाई लक्षित गरेर युट्युब सञ्चालन सुरु गरे सँगै युट्युबमा यो सुविधा उपलब्ध भएको हो । गुगलको एसिया प्यासेफिक ब्लग का अनुसार नेपाल सहित पाकिस्तान र श्रीलंकामा पनि यसै प्रकारको सेवाको सुरुवात गरेको जनाएको छ । युट्युबको लोगोमा NP लेखेर, गुगल'ले, युट्युब नेपाल को जनाउ दिएको छ। युट्युबको नेपाल संस्करणले नेपाल र नेपालीलाई लक्षित गरेर भिडियो बनाउने युट्युबप्रयोगकर्ताहरुलाई, धेरै नेपाली प्रयोगकर्ताहरु सम्म पुग्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै युट्युबमा भिडियो हेर्ने नेपाली प्रयोगकर्ताहरुले पनि नेपालमा रुचाइएका, धेरैले हेरेका, भिडियोहरु हेर्न पाउनेछन् । अब ट्रेन्डिङ भिडियो सेक्सनमा नेपालमा रुचाइएका, चलिरहेका भिडियोहरु देखिनेछ । तपाईले हेर्ने भिडियोहरु या भनौँ तपाईको भिडियो हेर्ने शैलीको अनुसन्धान गरेर, गुगल'ले तपाईलाई मनपर्न सक्ने भिडियोहरु देखाउँदै आएकोछ । अब यो लिस्टमा नेपालमा प्रचलनमा रहेका भिडियोहरु पनि थपिनेछन्। नेपाललाई लक्षित गरेर गतवर्ष नै युट्युबले नेपाली भाषामा उपलब्ध गराइसकेक
Aakar November 19, 2015
नेपाली ईन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरु माझ, बहुप्रतिक्षित, ईन्टरनेटविना भिडियो हेर्न सकिने "युट्युब अफलाइन प्लेब्याक" फिचर अब नेपालमा सुरु भएकोछ । युट्युबमा आफूलाई मनलागेका भिडियोहरु "सेभ" गरेर आफ्नो अनुकुल समयमा, विना इन्टरनेट हेर्न सकिन्छ। युट्युब अफलाइन भिडियो कसरी हेर्ने? युट्युबको मोबाइल एपमा, आफूले सेभ गरेका भिडियोहरु, ईन्टरनेट नभएको समयमा पनि हेर्न सकिन्छ । युट्युबमा भिडियो अफलाइन हेर्न, ईन्टरनेट भएको समयमा, युट्युबमा उपलब्ध भिडियोहरु सेभ गरेर राख्नुपर्छ । युट्युबमा अपलोड गरिएका भिडियोहरुमा दायाँ तर्फ, "डाउनलोड" बटन देख्न सकिन्छ। डाउनलोड बटन क्लिक गरेपछि, भिडियोको गुणस्तर आफूले छान्नु पर्छ। भिडियो डाउनलोड भइसकेपछि, विना इन्टरनेट फेरि त्यही भिडियोहरु आफ्नो युट्युब एपमा हेर्न सकिन्छ । युट्युबका अनुसार, एकपटक डाउनलोड गरेको भिडियो, ४८ घन्टा सम्म मात्र अफलाइन हेर्न मिल्छ । साथै, भिडियो अपलोडकर्ताले भिडियो अफलाइन हेर्नको लागि डाउनलोड गर्न दिने वा नदिने 'अप्सन'मा 'डाउनलोड गर्न नदिने' पनि भनेका हुनसक्छन् । यस्तो अवस्थामा, उक्त भिडियो डाउनलोड
नेपालमा तराईको आन्दोलन कारण देखाउँदै, भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेका कारण, पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएको समयमा, भारतीय दुतावासले नेपाल आयल निगमसँग डिजल-पेट्रोल माग गरेको समाचार बाहिर आएपछि, नेपाली ट्विटर प्रयोगकर्ताहरुले ट्विटर मार्फत नै दुतावासलाई तेल दिने अभियान चलाएका थिए । भारतको अघोषित नाकाबन्दीको कारण, पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल नभित्रिएको तर भारतीय दुतावासले तेलको माग गरेपछि, नेपाली ट्विटर प्रयोगकर्ताले व्यंग्यको रुपमा सुरु गरेको #DonateOilToIndianEmbassy ह्यासट्याग, बुधबार दिउँसो संसार भरि ट्रेन्ड भएको थियो । अतिथीलाई स्वागत सत्कार गर्ने प्रचलन भएको भन्दै, दुतावासले माग गरेपछि, हामीले तेल दिनुपर्छ भन्दै, ट्विटरमा भारतीय दुतावासलाई तेल दिन आग्रह गरिएको थियो । ट्विटरमा आग्रह गरिएको केही समयमै करिब २ सय युवाहरु स्वतस्फुर्त रुपमा भारतीय दुतावास अगाडी लैनचौरमा, प्लेकार्ड तथा पेट्रोल लिएर उपस्थित भएका थिए । #BackOffIndia लेखिएको प्लेकार्ड सहित भेला भएका युवाहरुले भारतको नाकाबन्दीको सांकेतिक विरोध गरेका थिए । यो ब्लग तयार गर्दासम्म, ट्विटरमा #
माइक्रोसफ्टको पहिलो ल्यापटप - सर्फेस बुक सार्वजनिक
Aakar October 07, 2015
न्युयोर्कमा आयोजना गरिएको, "माइक्रोसफ्ट विन्डोज १० डिभाइसेज" कार्यक्रममा, माइक्रोसफ्टले "सर्फेस बुक" ल्यापटप सार्वजनिक गरेको छ । सर्फेस बुक'लाई माइक्रोसफ्ट आफैँले बनाएको पहिलो ल्यापटप भनेको छ। १३.५ इन्च डिस्प्ले, ग्लास ट्रयाकप्याड, ब्याकलिट किबोर्ड आदि सहित आएको सर्फेस बुकलाई एप्पलको म्याकबुक प्रो, ल्यापटप सँग तुलना गरिएको छ । माइक्रोसफ्टका अनुसार, इन्टेलको नयाँ कोर प्रोसेसर, एनभिडियाको ग्राफिक्स सहित आएको सर्फेस बुक, अहिलेसम्मकै सबैभन्दा छिटो चल्ने (फास्टेस्ट) ल्यापटप हो । माइक्रोसफ्टले, सर्फेस बुक'को ब्याट्रि १२ घन्टा टिक्ने दावी गरेको छ । सर्फेसबुक ल्यापटपको मुल्य १५ सय डलर राखिएकोछ । हार्डवेयर र सफ्टवेयरको मामला'मा सँधै मजाक बनाइने, माइक्रोसफ्टले यस पटक भने सबैलाई चकित बनाइदिएकोछ । सर्फेस बुक, सर्फेस प्रो ४, सर्फेस पेन, नयाँ लुमिया फोन, डिस्प्ले डक, होलोलेन्स आदिको सार्वजनि गरिएसँगै माइक्रोसफ्टको चर्चा चुलिएकोछ । सर्फेस बुक'को भिडियो हेर्नुस् ! ➤ आकारपोष्ट एप् डाउनलोड गर्नुस् ।